Genesisi 18 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Ngirozi nhatu dzinoshanyira Abrahamu (1-8)
Sara anovimbiswa mwanakomana; anoseka (9-15)
Abrahamu anoteterera nezveSodhomu (16-33)
18 Jehovha+ akazozviratidza kwaari pamiti mikuru yeMamre,+ paakanga akagara pasuo retende masikati kwava kupisa. 2 Akasimudza musoro, akaona varume vatatu vakamira kwakadaro uko.+ Paakavaona, akavamhanyira achibva pasuo retende, akabva akotama pasi. 3 Akabva ati: “Jehovha, kana mandinzwira nyasha, ndapota musapfuura pamushumiri wenyu. 4 Ndapota, regai muunzirwe mvura shomanana uye mugezwe tsoka dzenyu;+ mogara pasi pemuti. 5 Sezvo mauya kumushumiri wenyu, regai ndikuunzirei kachingwa muwane simba,* mozopfuura henyu.” Ivo vakabva vati: “Zvakanaka. Ita hako zvawataura.” 6 Saka Abrahamu akamhanyira kutende kwaiva naSara akati: “Kurumidza! Tora zviyero zvitatu* zvefurawa yakatsetseka, woikanya, wobika chingwa.” 7 Abrahamu akamhanyirazve kwaiva nemombe, akasarudza chigondora chakanaka chine nyama yakapfava. Akachipa mushandi, uyo akakurumidza kuchigadzira. 8 Akabva atora mukaka neruomba nenyama yaakanga agadzira akazviisa pamberi pavo. Akamira pedyo navo pasi pemuti pavakanga vachidya.+ 9 Vakati kwaari: “Mudzimai wako Sara+ ari kupi?” Akapindura kuti: “Ari mutende umu.” 10 Mumwe wavo akaenderera mberi achiti: “Chokwadi ndichadzoka kwauri gore rinouya panguva ino, uye mudzimai wako Sara achava nemwanakomana.”+ Ipapo Sara akanga achiteerera ari pasuo retende, raiva shure kwemurume wacho. 11 Abrahamu naSara vakanga vakwegura, vava nemakore mazhinji.+ Sara akanga apfuura zera rekuita mwana.*+ 12 Saka Sara akasekera mumwoyo achiti: “Nekuchembera kwandaita uku uye nekukura kwaita ishe wangu, ndingawanawo mufaro wakadaro here?”+ 13 Jehovha akabva ati kuna Abrahamu: “Nei Sara aseka achiti, ‘Nekuchembera kwandaita uku ndingabereka mwana here?’ 14 Pane chinhu chingaomera Jehovha here?+ Ndichadzoka kwauri gore rinouya panguva ino, uye Sara achava nemwanakomana.” 15 Asi Sara akatanga kuramba, achiti, “Handina kumboseka ini!” nekuti aitya. Iye akabva ati: “Aiwa! Waseka.” 16 Varume vacho pavakasimuka kuti vachienda, vakatarisa zasi nechekuSodhomu;+ Abrahamu akanga achifamba navo achivaperekedza. 17 Jehovha akati: “Ndicharamba ndichivanzira Abrahamu zvandiri kuda kuita here?+ 18 Abrahamu achava rudzi rukuru uye rune simba, uye marudzi ese epanyika achakomborerwa* nekwaari.+ 19 Nekuti ndava kumuziva kuitira kuti arayire vanakomana vake, neimba yake inomutevera, kuti vachengete nzira yaJehovha vachiita zvakarurama uye vachitonga zvakarurama,+ kuti Jehovha azadzise zvaakavimbisa nezvaAbrahamu.” 20 Jehovha akabva ati: “Kuchema pamusoro peSodhomu neGomora kukuru zvechokwadi,+ uye chivi chavo chikuru kwazvo.+ 21 Ndichaburuka kuti ndione kana kuchema kwakasvika kwandiri nezvezvavari kuita chiri chokwadi. Kana chisiri, ndichazviziva.”+ 22 Varume vacho vakabva ipapo vakaenda vakananga kuSodhomu, asi Jehovha+ akasara aina Abrahamu. 23 Abrahamu akabva aswedera pedyo akati: “Mungaparadza vakarurama pamwe chete nevakaipa here?+ 24 Ngatitii muguta racho mune vanhu 50 vakarurama. Muchabva mavaparadza morega kukanganwira guta racho nekuda kwe50 vakarurama vari mariri here? 25 Hamungambofungi kuita saizvozvo, kuuraya munhu akarurama pamwe chete neakaipa zvekuti munhu akarurama anoitirwa zvakafanana nezvinoitirwa akaipa!+ Hamungambofungi zvakadaro.+ Mutongi wenyika yese angatadza kuita zvakarurama here?”+ 26 Jehovha akabva ati: “Kana ndikawana muguta reSodhomu vanhu 50 vakarurama, ndichakanganwira guta racho rese nekuda kwavo.” 27 Asi Abrahamu akabva atizve: “Ndapota, tarisai ndazvishingisa kutaura naJehovha, ini ndiri guruva nemadota. 28 Ngatitii pavakarurama vacho 50 pabviswa vashanu. Mungaparadza guta rese nekuda kwevashanu ivavo here?” Iye akati: “Handingariparadzi kana ndikawana 45 vakarurama imomo.”+ 29 Asi akataurazve naye akati: “Ngatitii 40 vawanikwa imomo.” Akapindura kuti: “Handingazviiti nekuda kwe40 vacho.” 30 Asi akaenderera mberi achiti: “Ndapota, Jehovha, musatsamwa,+ asi regai ndirambe ndichitaura: Ngatitii 30 chete vawanikwa imomo.” Akapindura kuti: “Handingazviiti kana ndikawana 30 imomo.” 31 Asi akatizve: “Ndapota, ndazvishingisa kutaura naJehovha: Ngatitii 20 chete vawanikwa imomo.” Akapindura kuti: “Handingariparadzi nekuda kwe20 vacho.” 32 Akazoti: “Ndapota, Jehovha, musatsamwa, asi regai ndichingotaura kekupedzisira: Ngatitii 10 vawanikwa imomo.” Akapindura kuti: “Handingariparadzi nekuda kwe10 vacho.” 33 Jehovha paakapedza kutaura naAbrahamu, akabva aenda+ uye Abrahamu akadzokera kutende rake.
^ ChiHeb., “musimbise mwoyo yenyu.”
^ ChiHeb., “zviyero zvemaseya zvitatu.” Seya uwandu hwaizadza mudziyo wemarita 7,33. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
^ ChiHeb., “Sara akanga aguma kuita maererano nenzira yevakadzi.” Izvi zvaireva kuti akanga asisaendi kumwedzi.
^ Kana kuti “achazviwanira chikomborero.”